BBC | Dr Ko Ko Gyi's Blog
BC Documentary: Visions of the Future – The Intelligence Revolution
Tags:BBC, Future, History, IBM, London, Predictions
I hope that DASSK was not calling ALL the Myanmar people DOGS
Ko Shine Win
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကခွေးကြောက်တတ်တယ်ဗျ။ ခွေးတွေကိုကြောက်လို့ ခဲကိုင်ပြီးသွားတယ်။ ခွေးတွေကလည်းရန်မူတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော့်ကပဲခွေးတွေကိုကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး ခွေးတွေကလည်းကျွန်တော့်ကိုပြန်ကြောက်ကြပါတယ်။
တကယ်တမ်းနောက်ပိုင်းမှတဖြည်းဖြည်းခွေးတွေနဲ့ရင်းနှီးသွားမှ ခွေးတွေကလည်းမကြောက်တော့သလို ကျွန်တော်ကလည်းခွေးတွေကိုမကြောက်တော့ပါဘူး။
Tags:Aung San Suu Kyi, BBC, Buddhism, Burma, Daw Suu, Muslim, Myanmar, Storm Rider
Tags:Aung San Suu Kyi, BBC, Burma, Daw Suu, Islamic Terrorism, Mahathir Mohamad, Malaysia, Myanmar
လူနည်းစုအရေး အလေးမပေးက အလှမ်းဝေးမည် ဒီမိုကရေစီ (ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး)
ဘာသာပြန်, ဆောင်းပါး မေ-၁၈၊ ၂၀၁၃ M-Media
မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကူးအပြောင်းကာလကို တစ်နှစ်ခွဲကျော်အထိ သိသိသာသာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်၏။ သို့တစေ နိုင်ငံတွင်းရှိ မွတ်စ်လင်မ် လူနည်းစုများအား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေမှု ကျယ်ပြန့်လာနေခြင်းအပေါ် ထိရောက်သောတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှု မရှိသေး။ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ သန်း ၆၀ အနက် အကြဉ်ခံရသော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ အပါအ၀င် မွတ်စ်လင်မ်တို့မှာ ပမာဏအားဖြင့် ၅ % သာ ရှိနေ၏။ အန္တရာယ်ကြီးလှသည့် ထိုပြဿနာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်ရှိအစိုးရမှ ကြပ်မတ် အရေးယူနိုင်စွမ်း မရှိသည်ကို တွေ့နေရ၏။
Tags:BBC, Burma, European Union, Muslim, Myanmar, Politics, Thein Sein
Be careful…ultranationalist Bama, Rakhine Buddhists and the Political or Military Masters
Be careful…ultranationalist Bama, Rakhine Buddhists and the Political or Military Masters …
In every atrocity both of you committed on Muslims of Myanmar…there could be SEVERE reaction on your fellow Buddhists in Bangladesh, India, Malaysia, INDONESIA, Middle East Arab Countries and around the world.
Please stop the Racist NONSENSES and arrest the INSTIGATORS, Masterminds and MASS-MURDERERS to get for PEACE FOR ALL.
If you fail to stop in time, you could lost your ILLEGALLY gained UNION because you cheated on the Panglon Agreement and exploiting all the privileges for Bama Buddhists only.
Tags:969, Bangladesh, BBC, Buddhism, Burma, Human Rights Watch, India, Muslim, Rakhine State, Wira Thu
Tags:Agence France-Presse, BBC, Buddhism, Colombo, Muslim, Sinhalese New Year, Sinhalese people, Sri Lanka
Tags:Asia, BBC, Burma, Kachin State, Myanmar, Shan State, Thein Sein, United
BURMA: Reform process hindered by two sources of governing power
Wednesday, 27 February 2013 18:00 Sai Wansai
President Thein Sein on Tuesday, February 26, met Norway’s prime minister as he kicked offa10-day visit to Europe aimed at forging stronger ties between Burma and the West. He will be visiting Finland, Austria, Belgium and Italy before returning home on March 8.
Tags:BBC, Burma, Kachin Independence Army, Kachin State, Norway, Shan State, Than Shwe, Thein Sein